နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သူများ အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့် | Myanmar President Office
၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အထူး ကုန်စည်ခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သူများအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သဘင်ဆောင်၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် တက်ရောက်၍ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ် ချီးမြှင့်သည်။
အခမ်းအနား၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ယနေ့ အခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်လာကြသူများသည် နိုင်ငံတော်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် နိုင်ငံတော်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးနေကြသူများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံပြီး အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားခွင့်ရသည့်အတွက် လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
နိုင်ငံတစ်ဝန်း အခွန်တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့် အခွန်ထမ်း (၁၀၀၀) စာရင်းကို အခွန်အသိ၊ အခွန်ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားလာစေရေးအတွက် ဦးတည်ပြီး နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။
အခွန်တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကို ဖိတ်ကြား တွေ့ဆုံ ဂုဏ်ပြုလိုသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကန့်သတ်ဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ယနေ့ အခမ်းအနားကို မတက်ရောက်နိုင်သူများ၊ ဖိတ်ကြားခြင်း မပြုနိုင်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သည့် အခွန်ထမ်း (၁၀၀၀) စာရင်းတွင် မပါဝင် သော်လည်း အခွန်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ လိုက်နာပြီး အခွန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူ များကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ နောင်တွင်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် မိမိတို့ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူများကို အကျိုးပြုနိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါကြောင်း။
မိမိတို့ အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူကိုဗဟိုပြုပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်သော စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီးပွားရေးမူဝါဒများ ချမှတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာတွင် “နိုင်ငံတော်၏ဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိရန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး မျှတသော အခွန်စနစ်ထူထောင်၍ ပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဋ္ဌာန်းလျက် အကာအကွယ်ပေးရန်” ဟု အခွန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မူဝါဒ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း။
နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းသည် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော် ယန္တရားများလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာငွေရရှိရန် သယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် ပြည်ပချေးငွေများအပေါ် မှီခိုသည့် နည်းလမ်းထက် အခွန်ကောက်ခံခြင်း ကသာ တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ မေခရိုစီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် အသင့်တော်ဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှုကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် အထောက်အကူပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
အခွန်ကောက်ခံခြင်းသည် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသုံးပြုရန် လိုအပ် သည့် အသုံးစရိတ်များကို ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ထည့်ဝင်သည့်နည်းလမ်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူများထံမှ အခွန်အဖြစ် ကောက်ခံသည့် ငွေကြေးများသည် အစိုးရဘတ်ဂျက်ထဲသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး အစိုးရက ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အခွန်သည် ပြည်သူများ ပိုင်ဆိုင်သည့် ဥစ္စာပစ္စည်းဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ ကြောင်း။
ပြည်သူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို တာဝန်ကျေပွန်စွာဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်များ ပေးဆောင်သည့်အတိုင်း အစိုးရများအနေဖြင့်လည်း အခွန်ထမ်းပြည်သူများ ထည့်ဝင်ထားသည့် အခွန်ငွေများကို ပြည်သူများကိုယ်စား အလေအလွင့်မရှိစေဘဲ အကျိုး ရှိစွာ စီမံသုံးစွဲရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ကာလရှည်ကြာ ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည့် အခွန်ယဉ်ကျေးမှုကို ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရှေးအစဉ်အလာအရ “ပြည့်ဝမ်း”ဟု ခေါ်ဆိုကြသည့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ပံ့ပိုးမှု၊ ကူညီမှုသည်လည်း အဓိကကျပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း လုပ်ငန်းငယ်များအနေဖြင့် လက်လှမ်းမမီဖြစ်နေသေးသည့် ကိစ္စရပ်များကို စံနမူနာပြအဖြစ် လမ်းပြခေါ်ဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အဓိကကျသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် အခွန်ကြောင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဆောင်သည့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လစဉ်တွေ့ဆုံကာ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အခက်အခဲ များ၊ လိုအပ်ချက်များကို ညှိနှိုင်းအဖြေရှာပြီး အချိန်အခါအရ အကောင်းဆုံး အနေအထား ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။
တစ်ဖက်တွင်လည်း ခေတ်နှင့်မလျော်ညီတော့သည့် အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် အခွန်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အခွန်စနစ်ကို မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်း နှင့်အညီ ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး အခွန်ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာရန်ဆိုလျှင် အခွန်စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်၊ ဆက်စပ်၊ ပတ်သက်၊ ဆက်နွှယ်နေသူမှန်သမျှ ရိုးသားဖြောင့်မတ် မှန်ကန်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုများ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရှိနေရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။
အခွန်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဖြစ် အခွန်ရုံးက စည်းကြပ်သည့် စနစ်အစား အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် စည်းကြပ်သည့်စနစ်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် နည်းပညာအခြေပြုသည့် အခွန် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ရှေ့ပြေးစီမံချက်အဖြစ် အီလက် ထရောနစ်စနစ်နှင့် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်စေရေး၊ အခွန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းနိုင်စေရေး တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ယင်းအစီအစဉ်များကို ဆက်လက်တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ယခုကာလတွင် Covid-19 ကြောင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများနှင့် အလုပ် သမားများ၏ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့ပါးသက်သာစေရေးအတွက်လည်း အခွန် ဆိုင်ရာ သက်သာခွင့်များနှင့် ခုနှိမ်ခွင့်များကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် အခွန်ရရှိရေး တစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ပြီး အခွန်မူဝါဒများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ လိုအပ်ချက်၊ အခြေအနေနှင့် အချိန် အခါများအရ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်အောင် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အခွန်စနစ် ကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူခြင်း၊ တရားမျှတမှုရှိခြင်း၊ တိကျမှန်ကန်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းစသည့် အခြေခံအချက်များနှင့် ပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ပါကြောင်း။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် နိုင်ငံသားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝကို ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်စေရုံသာမက၊ တိုင်းပြည်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ တိုင်းပြည်၏ ပုံရိပ်ကို ပိုမိုမြင့်တက်လာစေနိုင်ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ အနေဖြင့် အခက်အခဲများရှိသော်လည်း မိမိတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရင်း အခွန်ပေးဆောင်မှုကို တာဝန်သိစွာ၊ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်နေကြ သည်ကိုလည်း တွေ့မြင်ရသည့်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအနေဖြင့် ယခုလို အခွန်တာဝန်ကျေပွန်သည့် အစဉ်အလာကောင်း များကို ရေရှည်တည်တံ့အောင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြရန်နှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့်လည်း ယင်းအစဉ်အလာကောင်းများကို အတုယူပြီး အခွန်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း။
မိမိတို့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ အခွန်ထမ်းပြည်သူများ၏ လုပ်ငန်းများ နိုင်ငံ တကာ စံနှုန်းများနှင့် ညီညွတ်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် ပြည့်စုံသည့်၊ မျှတသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမို ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတက (၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက်) ဝင်ငွေခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့ကြသော မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်ကြသည့် ဥရောပ အာရှကော်မာရှယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်မြင့်၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် ဌာနကြီးမှူး ဦးအောင်ရဲဝင်း၊ အီလန်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဒေါ်သိန်းညွန့်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖျော်ရည်ယမကာ ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မြပွင့်ဖြူ၊ မြဝတီဘဏ်လီမိတက် အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးယုလွင်၊ သမဝါယမဘဏ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေး၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် Deputy CEO ဦးအောင်ကျော်မျိုး၊ မြန်မာစပျစ်နှင့် အဖျော်ရည်ကုမ္ပဏီလီမိတက် Co-Chairman ဦးအောင်မိုးကျော်၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့် ဒန်ကိုထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဒေါ်စောသုဝေတို့ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်ကြသည့် ဒန်ကိုထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်ခိုင်၊ ကျော်စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဦးတင်အောင်ကျော်၊ ပီတီစွမ်းအားထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဦးဇင်မင်းအောင်၊ စီးတီးမတ်ဟိုး(လ်)ဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှုဆောင်အရာရှိ ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင့်၊ အာရှစွမ်းအားကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဦးသူရကျော်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖျော်ရည် ယမကာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဒေါ်မြပွင့်ဖြူ၊ ရွှေဗျိုင်းဖြူကုမ္ပဏီလီမိတက် မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းဝင်းဇော်၊ ဟေးဒေးအင်နာဂျီ ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးထက်ခိုင်ဝင်း၊ မက်(စ်)အင်နာဂျီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့် လီဗီးယား လီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဦးစိုးတင့်တို့ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အထူး ကုန်စည်ခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်ကြသည့် ဒဂုံအဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီလီမိတက် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးလှမင်းတူ၊ ရွိုင်ရယ်ကလပ်ဘီးဘရေ့(ခ်ျ)ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ခင်လေးနွယ်၊ အက်(စ်)အမ်အမ် ရွှေမြန်မာအဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဦးစိုင်းလှိုင်ဘုန်းအောင်၊ ရောင်နီအရက်ချက်စက်ရုံ ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သိန်းလွင်၊ ဂိုး(လ်) ဒင်းအိုရီယဲ့(န်)တဲ(လဲ) လိ(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း၊ ဗစ်ထရီမြန်မာဂရု(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းဆွေ၊ ဗဟိုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဦးစိုင်းလျှံ(ခ)ဌေးဝင်း၊ အာရှဖျော်ရည်များ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးထွန်းဝင်း၊ လင်းလက်ဝင်းကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးထွန်းကြည်နှင့် ရတနာကြယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်နိုင်တို့ကို ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်ကြသည့် Moattama Gas Transportation Co.,Ltd. Acting General Manager ဦးစိုးသောင်းမြင့်၊ Telenor Myanmar Ltd. Chief Corporate Affairs Officer Hans Marting Hoegh Henrichsen၊ Taninthayi Pipeline Company LLC (Myanmar Branch) Finance Manager ဒေါ်ခင်မိုးကြူ၊ Myanmar Yang Tse Copper Ltd. Chairman Mr. Zhang Yupeng နှင့် Myanmar Brewery Ltd. CSV Director ဒေါ်မေစံပယ်ဝင်းတို့ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူ များဖြစ်ကြသည့် Telenor Myanmar Ltd. Chief Business Officer ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဌေး၊ Ooredoo Myanmar Ltd. General Accounting Senior Manager ဒေါ်ဝိုင်းရည်မွန်၊ Myanmar Brewery Ltd. Chief Operating Officer ဦးကျော်ကြား၊ Virginia Tobacco Co.,Ltd. Deputy Managing Director ဦးမြင့်ဦးနှင့် Grand Royal Group International Co.,Ltd. Co-Chairman ဦးအောင်မိုးကျော်တို့ကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အထူး ကုန်စည်ခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူ များ ဖြစ်ကြသည့် Myanmar Brewery Ltd. Deputy Managing Director ဦးစိုးကျော်သူ၊ Virginia Tobacco Co.,Ltd. Deputy Managing Director ဦးမြင့်ဦး၊ Grand Royal Group International Co.,Ltd. Co-Chairman ဦးအောင်မိုးကျော်၊ Heineken Myanmar Ltd. Corporate Affairs Director ဒေါ်မြတ်ဖြူသက်နှင့် Myanmar Carlsberg Co.,Ltd. Managing Director Mr. Christoph Varik တို့ကို ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ် ချီးမြှင့်သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်သည် ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် အတွက် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် လည်းကောင်း၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော မြန်မာ ကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်းကောင်း၊ အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့ကြသော မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်းကောင်း၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်လည်းကောင်း၊ အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံးပေးဆောင်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လည်းကောင်း စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဦးမင်းသူ၊ ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးသောင်းထွန်း၊ ဒေါက်တာ အောင်သူ၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ဦးဝင်းခိုင်၊ ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ဦးဟန်ဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။